China galvanized welded waya nsu maka ugbo na ulo oru ngwa Manufacturer na Supplier | Oghere
Usoro mmepụta nke eriri ikuku a na-agbanye mgbanaka dị mfe karịa ngere welded ndị ọzọ. Firstly, na-eji nchara waya welded ọnụ na abuo okokụre na-ekpo ọkụ itinye kpaliri enweghị site ekwe. Maka ịchekwa ego, anyị na-echepụta ogwe ntupu a na-enweghị mpempe akwụkwọ na L dị mfe iji gbakọta. Ma waya dayameta mgbe kpaliri mkpuchi nwere ike ịbụ 4mm na zinc ntekwasa bụ ruo 450μ / mg ya mere na ọ bụ a elu ike na inogide waya ntupu ngere.
PRO.FENCE na-enye eriri ikuku welded galvanized n'ọtụtụ dị iche iche, waya dayameta na ntanye ntanye dịka ihe achọrọ. Tụlee na ndị ọzọ na asọmpi, anyị kpaliri ngwaahịa nwere ya uru nke na-enwu gbaa na zuru ezu zinc mkpuchi enweghị ihe ọ bụla zinc fọduru. Nke ahụ ga - eme ka mgbochi na - agbatị ma gbasaa oge ojiji.
Ọ bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ngere nke ogo dị elu na ọnụ ala maka ọrụ gị. Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-eji ya dị ka ogige nchebe nke ụlọ ọrụ ike, ogige ntụrụndụ, ogige anụ ụlọ wdg.
Ntupu: 100 × 100mm
Biputere: 40 × 40 × 2.5mm
Emechara: Hot tinye galvanized
Nkebi NO: PRO-05 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: Ogige ugbo maka ehi, atụrụ, mgbada, ịnyịnya
Osote: M-kpaliri kpaliri welded ntupu ngere (One-mpempe Post) maka anyanwụ ugbo